IBET789 MM Myanmar - IBET789 အသိအမှတ်ပြု ​အေးဂျင့်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် | IBET789 Myanmar
iBet789 ၏ အေးဂျင့်တစ်ဦး ဘာကြောင့် ဖြစ်သင့်သလဲ?
iBET789 Myanmar သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အားကစားများ ပွဲစဉ်များနှင့် ဂိမ်းများကို ကစားသူများအတွက် စီစဉ်ပေးနေသော အဆုံးမရှိ အွန်လိုင်း အားကစား လောင်းကစား ဝဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်။ iBet789 သည် ပေါက်ကြေးကောင်းများနှင့် မြန်ဆန်သော အနိုင်အရှုံးရလဒ်များ ပေးစွမ်းနိုင်သော ကာစီနို အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယား တော်ဝင်အစိုးရမှ တရားဝင်လိုင်စဉ်ပေးအပ်ထားပြီး မြန်မာ၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား အစရှိသော အာရှနိုင်ငံများ၏ ယုံကြည်မှုအရရှိဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးသော ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
iBet789 အေးဂျင့်တစ်ဦး ယခုပဲ လုပ်လိုက်ပါ။
iBet789 Myanmar အေးဂျင့်၏ အကျိုးအမြတ်များ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကော်မရှင် အမြင့်ဆုံး
iBet789 သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင် အမြင့်ဆုံးသော ကော်မရှင် ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ iBet789 အေးဂျင့်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီး ကော်မရှင် ၁% အမြဲ ရယူလိုက်ပါ။
မြန်မာ နံပါတ် ၁ အားကစားလောင်းကစား
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ iBet789 သည် အာရှနိုင်ငံများ၏ အားကစားလောင်းကစားခြင်းကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ iBet789 သညိ်အမြဲ ဆန်းသစ်နေစေပြီး အခြားသူများကို Bet789 အကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာ မိတ်ဆက်နိုင်သော အေးဂျင့်တစ်ဦး ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
English Premier League, UEFA, La Liga, Serie A, Bundesliga အစရှိသော မေဂျာလိဂ်များတွင် မြန်မာပေါက်ကြေး ထုတ်ပေးထားခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားရန် iBet789 မှ စီစဉ်ထားပါသည်။
iBet789 တွင် ATM Transfer, Cash Deposit နှင့် Online Banking စသည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကစားသူတိုင်းအတွက် အမျိုးမျိုးသော ငွေသွင်းနည်းများ စီစဉ်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကဘဏ်များဖြစ်သော KBZ Bank, Aya Bank, Waze Pay, CB Bank စသည်တို့မှငွေပေးချေခြင်း နည်းလမ်းများကိုလည်း စီစဉ်ထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဦးဆောင်ကုပ္မဏီအဖြစ် iBet789 တွင် အားကစားလောင်းကစားခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ထီနှင့် ကီနို အစရှိသဖြင့် ကစားနည်းမျိုးစုံ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ iBet789 အေးဂျင့်များမှ ကစားသူအကြိုက်ဂိမ်းအား လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၄/၇ အေးဂျင့် ဝန်ဆောင်မှု
iBet789 အေးဂျင့်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး သင်အတွက် အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမည့် အေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကလည်း အချိန်ပြည့် ရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ iBet789 အေးဂျင့်များကို အကူအညီပေးသွားရန် ရည်မှန်းချက်လည်း ရှိပါသည်။
iBet789’s iBet789 ၏ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ
iBet789 အေးဂျင့်တစ်ဦး ဖြစ်လာရန် အဆင့်များ
iBet789 အေးဂျင့်အကောင့်တစ်ခု ယခုပဲဖွင့်လိုက်ပါ။ သင်၏အကောင့်ကို အလုပ်ချိန် ၁ရက်အတွင်း အတည်ပြုလက်ခံပါမည်။
iBet789 အကြောင်း စတင်ကြေငြာပြီး မန်ဘာအသစ်များ အတွက် အကောင့်ဖွင်းပြီး ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ ကစားသူတစ်ဦးတစ်ယောက် ငွေသွင်းတိုင်း ကော်မရှင်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
iBet789 အေးဂျင့် စနစ်မှ သင့်မန်ဘာများ ကစားထားသော လက်မှတ်များ အဖြေထွက်လျှင် သင်ရရှိမည့် ကော်မရှင်သည် သင်၏ အေးဂျင့်အကောင့်ထဲသို့ ချက်ချင်းဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။
iBet789 အေးဂျင့် အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အွန်လိုင်းကာစီနိုလောက ဦးဆောာင်သူအဖြစ် iBet789 မှ များစွာသော တိုက်ရိုက်ကာစီနိုများကို တိုက်ရိုက်ဒိုင်စနစ်ဖြင့် စီစဉ်ထားပေးပါသည်။
iBet789 အေးဂျင့် အစီအစဉ်သည် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ကစားသူများ၏ ငွေသွင်းသည့်အခြေအနေများမှ ကော်မရှင်များ ရယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ တိုက်ရိုက်ကာစီနိုကို မိမိအိမ်မှ ခံစားခြင်း
၁။ ပရိုမို အမျိုးအစား – အေးဂျင့် အစီအစဉ်
၂။ ပရိုမို ကာလ – ပရိုမိုးရှင်းပြီးဆုံးသည်ဟု မထုတ်ပြန်မရှင်း တည်ရှိမည်
၃။ ရယူနိုင်သော မန်ဘာများ – iBet789 အေးဂျင့်အားလုံး
၄။ ပထမအကြိမ် အနည်းဆုံးသွင်းငွေ – ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်
၅။ အနည်းဆုံးသွင်းငွေ – ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
၆။ အနည်းဆုံး ကော်မရှင် – ၁၀၀၀ ကျပ်
၇။ အနည်းဆုံး လစဉ်ကစားသူ – ကစားနေသူ ၃ ဦး
၈။ အများဆုံးကော်မရှင် – အကန့်အသတ်မရှိ
၂၀၀၀၀၀ ကျပ် – ၄၉၉၀၀၀ ကျပ် ဝ.၅%
၅၀၀၀၀၀ ကျပ် – ၉၉၉၀၀၀ ကျပ် ဝ.၇၅%
၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် အထက် ၁.၀၀%
၉။ ကော်မရှင် ပေးချိန် – လစဉ် (၃)ရက်နေ့ မတိုင်မီ
၁၀။ အေးဂျင့်တစ်ဦ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် – အေးဂျင့်အကောင့်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မည်၊ မန်ဘာအကောင့်များ ဖွင့်နိုင်မည်၊ ငွေသွင်း ငွေထုတ် နှင့် ရီပို့ တင်ပြချက်များ
၁၁။ ရရှိနိုင်သည့် ဂိမ်းများ – အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ထီနှင့် ကီနို
iBet789 အေးဂျင့်အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ?
iBet789 အေးဂျင့်အစီအစဉ်ကို လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ စာရင်းသွင်းရန်သာ လိုအပ်ပြီး အလုပ်ချိန် ၁ရက် အတွင်း သင့်ထံ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ကာ သင်၏ အစီအစဉ် ဝင်ရောက်ခြင်းကို လက်ခံပေးပါမည်။
ကော်မရှင် ဘယ်အချိန် ပြန်ရမလဲ?
လစဉ် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ လစဉ် ၃ ရက်နေ့မတိုင်မီ ကော်မရှင် ရရှိပါမည်။
အနည်းဆုံး ငွေထုတ်နိုင်သည့် ပမာဏက?
အနည်းဆုံးမှာ ၁၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းမှ ကော်မရှင် ရရှိနိုင်ပါသလား?
မရရှိပါ။ သင်ကစားရန် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်ရယူရန် မန်ဘာအကောင့်ဖွင့်လှစ်ကာ ကိုယ်တိုင်ကစားသည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် သင်၏ အေးဂျင့်အကောင့်ကို တာဝန်ရပ်ဆိုင်းပါမည်
iBet789 အေးဂျင့် အကောင့်အား ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားရန် ကစားနေသူ မည်မျှလိုအပ် သလဲ?
iBet789 အေးဂျင့် အကောင့်အား ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားရန် ကစားနေသူ ၃ ဦး အနည်းဆုံး လိုအပ်ပါသည်။
iBet789 အေးဂျင့် အကောင့်၏ အချက်အလက်များ မည်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း?
iBet789 အေးဂျင့် အကောင့်၏ အချက်အလက်များ ကို ဝန်ဆောင်မှု အသင်းအား ဆက်သွယ်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
အေးဂျင့်အကောင့်အတွက် ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား?
သင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် iBet789 တွင် လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပေးထားပါသည်။ သင်၏ အချက်အလက်များကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
iBet789 အေး၈ျင့်အကောင့်၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားလျှင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ရမည်နည်း?
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကို ဆက်သွယ်ကာ သင်၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ် ပြောင်းလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။